Dagaalo culus iyo qaraxyo Ciidamada AMISOM ku qabsaday wadada isku xirta Baydhabo iyo Diinsoor – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
19th July 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Dagaal xoogan iyo qarax ismiidaamin ah ayaa ka dhacay duleedka deegaanka Manaas ee Gobolka Baay, kadib markii kolonyo Ciidamada AMISOM oo ka soo baxay Baydhabo kuna sii jeeda Diinsoor wadada loo galay.
Sida ay sheegayaan wararka Ciidamada AMISOM ayaa la sheegay in dagaalo ku qabsadeen wadada isku xirta Baydhabo iyo Diinsoor, iyadoo qarax weyn laga maqlay wadadaas.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalo culus oo u dhaxeeya Ciidamada Itoobiya ee AMISOM iyo Al-Shabaab uu wali ka socdo duleedka Manaas, waxaana labada dhinac ay isu adeegsanayaan hub cul culus, sida ay dadka deegaanka ku soo waramayaan.
Al-Shabaab ayaa sheegatay in gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo uu kaxeynayay ruux naftii hure ah uu la beegsaday kolonyada Ciidamada Itoobiya la socdeen, iyagoo intaa ku daray in khasaare xoogan ay gaarsiiyeen, gaadiid fara badan ku gubeen.
Isgaarsiinta deegaanka ayaa ah mid aad u adag, iyadoo aan wali faah faahin rasmi ah laga heyn khasaaraha dagaalka ka dhashay, waxaana dhaq dhaqaaqyo ciidan ay ka jiraan deegaano ka tirsan Gobolka Baay oo ciidamada huwanta ay ka bilaabeen guluf dagaal.
Ciidamada huwanta ayaa shalay la wareegay degmada Ufurow ee Gobolka Baay, waxaana ay qorshayaan inay u sii gudbaan degmada Diinsoor oo ay ku xoogan yihiin Al-Shabaab.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo warqadihii aqoonsiga ka guddoomay danjiraha cusub ee UK